China Ball Point izibaya mveliso kunye nabenzi | SJJ
Iipeni zeballpoint zizixhobo eziqhelekileyo zokubhala ezisetyenziselwa ukufaka inki kumphezulu wabantu abaninzi, naphina. Singumenzi wobuchwephesha kunye nomthengisi weentengiso zebhokisi yokwazisa enamava enyaka, sinika uluhlu olubanzi lweepeni, ezinjengeebhola zebhola, iintlanti zebhola yensimbi, i-bambo ...
Iipeni zeballpoint zizixhobo eziqhelekileyo zokubhala ezisetyenziselwa ukufaka inki kumphezulu wabantu abaninzi, naphina. Singumvelisi oqeqeshiweyo kunye nomnikezeli weepeni zebhola yokwazisa enamava enyaka, sinika uluhlu olubanzi lweepeni, ezinje ngeepeni zebhola, iipeni zebhola yentsimbi, iipeni zoqalo, imibala yeebhloko zemibala emininzi, iipeni zebhola, njl.
Cela ikowuti ukuba wazi ngakumbi malunga nezinto. Nika inkonzo ye-OEM kunye noyilo lomsebenzi wobugcisa wasimahla.
Iqulathe inki eyahlukileyo njengoko wena
Ngaba kwakhona ipeni ezilahlwayo, ipeni enokugcwaliseka, usiba oluninzi, usiba olubuyisekayo, njl.
Izinto eziphathekayo zinokuba ngumthi wokusingqongileyo, i-abs, njengokuba, insimbi engenasici, njl.
Unokuprintwa kunye nawe i-AD kunye nelogo yabathengi ngeenjongo zokuphucula
Ipenisi yeGelpoint yeBall
Iipeni zebala yeBala
Iipeni zebhola entle
Ipeni entle yePali